Huawei P30 Pro, ihe karịrị igwefoto obi ọgụ [Nyochaa] | Gam akporosis
Dị ka ị maara nke ọma, kemgbe ụbọchị mmalite na Paris anyị nwere na aka anyị ihe na-erughị Huawei P30 Pro, anyị na-ahapụ gị a njikọ mbụ anyị mmetụta na n'ezie unboxing nke ngwaọrụ. Agbanyeghị, anyị ejirila ya n'aka anyị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu izu ma ugbu a bụ oge iji nye gị ohere iji hụ nyocha miri emi anyị.
Agbanyeghị, iji nweta nkwubi okwu ọ dị mkpa ka ị soro anyị, ebe anyị ga-agwa gị nke ọ bụla nkọwa ya. Chọpụta nkọwa niile nke Huawei P30 Pro nke karịrị igwefoto dị egwu na ọtụtụ nnwere onwe, ọ kacha mma?
Ọ baghị uru ikwu M na-agba gị ka ị gafere vidiyo ebe ị ga-ahụ nke ọma ihe ọ bụla m nwere ike ịgwa gị ebe aAgbanyeghị, data ahụ ga-aka akọwapụta nke ọma na nyocha a ederede, ebe ị ga-enwe ike ịlele naanị nkọwa ndị ahụ kachasị masị gị. Agbanyeghị, ezigbo ohere iji kwado obodo Androidsis bụ kpomkwem iji lelee vidiyo anyị wee hapụ anyị "dịka" ọ bụrụ na ị masịrị ya. Lelee ọnụ ọnụ a ozugbo na Amazon.
1 Nzube na ihe: O nwere ike ịbụ ihe kachasị mma na ahịa
2 Ihe ngwugwu - Unboxing
3 Atụmatụ: Akwa arụmọrụ ma nwalee ngwaike
4 Igwefoto na ihuenyo: Igwefoto kachasị mma na ahịa maka ihuenyo "nkịtị"
5 Ihe mmetụta kachasị mma na ihuenyo, obodo kwụụrụ na ọtụtụ ndị ọzọ
Nzube na ihe: O nwere ike ịbụ ihe kachasị mma na ahịa
N'ebe a haziri, Huawei etinyewo anụ niile na imi ihe, anyị na-ahụkwa ihe ọla maka etiti ahụ na iko. Igwe a dị n'azụ azụ dị ntakịrị n'akụkụ, dị ka ọ dị na ihuenyo ahụ, nke a na-eme ya de facto, n'agbanyeghị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sentimita 6,5, na otu n'ime ekwentị ndị kachasị mma anyị nyochaworo n'oge a niile, ọ dị mma karịa Huawei Mate 20 Pro ma nwee nkasi obi karịa njedebe nke asọmpi ahụ dị ka iPhone XS Max. A ga-enyekwa ngwaọrụ a na agba dị iche iche: Pearl White (ọcha dị ọcha), Crystal ume (unit anyị na-enyocha), Black, Amber Sunrise (gradient between red and orange) and Aurora (gradient between blue and green).
Akụkụ: 158 x 73,4 x 8,4 mm
Agba: Pearl White, Crystal na-eku ume, Black, Amber Sunrise na Aurora.
Dị ka anyị na-ahụ, ọ pere mpe. Ọzọkwa site n'ihu, ebe anyị nwere obere obere etiti, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụghị akụkụ okpokolo agba n'ihi ntụgharị nke ihuenyo ahụ ma mechie ebe dị elu na Ọkwa mmetụta dobe nke kacha dị ntakịrị, na-agbahapụ nnukwu "ọkwa" nke Huawei Mate 20 Pro. Anyị nwere ọdịiche na ọgbọ gara aga yana ndị niile dị ugbu a, eziokwu ahụ bụ na ọnụ elu na nke ala nwere akụkụ aka nri na-emecha atụmatụ nke Ekwesịrị m iru eru dị ka oke. Ndokwa igwefoto kwụ ọtọ na-aga n'ihu na S Series saga, mgbe nkọwa iji banye na akaụntụ bụ eziokwu na ọkụ na igwefoto ToF na ihe mmetụta laser abanyela n'ime mkpuchi iko azụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị adị na ekwentị mkpanaaka mara mma taa na nke ahụ dọọrọ uche m. Na ọkwa mkpịsị aka na unyi, dị ka ọ na-eme mgbe niile na njedebe ndị a dị nro, akara mkpịsị aka ga-abụ ụlọ ọrụ na-adịgide adịgide.
Ihe ngwugwu - Unboxing
Na ọkwa unboxing Huawei Ọ dịbeghị ihe ọ bụla, ọtụtụ rọrọ nrọ nke itinye ekweisi ikuku ma ọ bụ nkọwa ọ bụla ọzọ ga-eme ka anyị ghara ikwu okwu, mana nke bụ eziokwu bụ na Huawei's P Series abụbeghị ọkwa dị adị, yabụ na ọ gaghị eju anyị anya. Anyị nwere igbe dị ka ụdị nke gara aga nke gụnyere ihe niile: 40W chaja ngwa ngwa; Igwe USB-C; Akwụkwọ ikike akwụkwọ na ntuziaka; Uzo silicone ikpe; USB-C na-akwụ ụgwọ USB; Huawei P30 Pro ọnụ.
Ihe kachasị dị ịrịba ama na enweghị mgbagha bụ ụgwọ ngwa ngwa nke ihe ruru 40W nke gunyere na ndabara, nwee ike ịnye anyị a 71% nke ngụkọta batrị na ọkara ọkara awa, Ọbụna ihe ịtụnanya karịa ma ọ bụrụ na anyị echee na ngwaọrụ a enweghị ihe na-erughị 4.200 mAh. USB na USB-C na-akwụ ụgwọ eriri na ekweisi na-anọgide na ahịrị Huawei. Na-ekwu, gịnị kpatara ekweisi USB-C? Ọ dị mma n'ihi na oge a Huawei agbahapụla 3,5mm Jack na ụdị Pro nke P30, ọ bụ ezie na anyị ga-arụtụ aka na anyị agaghị enwe ihe nkwụnye USB-C na 3,5mm Jack, nkọwa nke wutere m.
Atụmatụ: Akwa arụmọrụ ma nwalee ngwaike
Nhazi Kirin 980-core -
Nchekwa n'ime 128/256/512 GB (Gbasaa na nanoSD)
Igwefoto na-aga n'ihu 40 MP nwere oghere f / 1.6 + 20 MP obosara 120º nwere oghere f / 2.2 + 8 MP nwere oghere f / 3.4 + TOF sensor
Njikọ Bluetooth 5.0 jack 3.5 mm USB-C WiFi 802.11 a / c GPS GLONASS IP68
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka ihe mmetụta ike na ihuenyo - NFC - Face Kpọghe - Dolby Atmos - Infrared mmetụta
Ihe njirimara nke Huawei P30 Pro a maara nke ọma, ndị Huawei anaghị ewepụta ọtụtụ ihe na P Series, nke na-ahọrọ ibute ụzọ di na nwunye na nke a. Agbanyeghị, nke a nwere uru dị mkpa, nke ahụ bụ na Huawei P30 ahọrọla maka Kirin 980 isi asatọ ma gosipụta ike, nke na-enye anyị Ihe 261.115 na AnTuTu, tinyere 8 GB nke Ram na Mali G76.
Ya mere, anyị ga-akụ nzọ na ngalaba ndị ọzọ iji gosipụta, dịka ọmụmaatụ eziokwu ahụ na ọ gụnyere ihe mmetụta infrared nke ga-enye anyị ohere, n'etiti ihe ndị ọzọ, ijikwa televishọn na ntụ oyi. Na ọkwa ụda anyị nwere usoro stereo ohuru, yana onye isi okwu na ala, ebe onye na-ekwu okwu oku di n’azu iko. Anyị na-anwale na anyị kwupụtara na ogo na ike nke ọkà okwu a jikọtara n'azụ ihuenyo na-enye arụmọrụ opekempe nke nke ọkà okwu ọdịnala, Akụkụ ọzọ na ọkwa nke ihe ọhụrụ na-agbakwunye ọnụ ọgụgụ maka Huawei P30 Pro.
Igwefoto na ihuenyo: Igwefoto kachasị mma na ahịa maka ihuenyo "nkịtị"
Anyị nọ na ọkwa igwefoto na ngwakọta kachasị mma n'ahịa, anyị anaghị ekwu ya, DxOMark na-eme ka o doo anya, nke na-enye ya ihe na-erughị isi 112 na-ahapụ ya na mbụ. Nwere ihe mmetụta 40 MP na oghere f / 1.6, ọzọ 20 MP obosara 120º na oghere f / 2.2 na n'ikpeazụ 8 MP na oghere f / 3.4 niile soro ToF sensor na-enye anyị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nsonaazụ zuru oke na «eserese mode». Maka igwefoto n'ihu enweghi MP32 dịkarịa ala na oghere f / 2.0 na atụmatụ sọftụwia niile nke 'ụmụnne nwanyị nwanyị. Anyị na-ahapụ gị n'okpuru ndepụta nke ule ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ya mbido 1x, 5x, 10x ma rue 50x, Ahụtụbeghị mbụ na ngwaọrụ mkpanaka nke njirimara ndị a, na okwu: akpali akpali. N'aka nke ya, anyị nwere usoro ndekọ dị iche iche ketara n'aka Huawei Mate 20 Pro dị ka agba site na AI, mmetụta eserese nke etinyere na igwefoto vidiyo dị ndụ na ụfọdụ nzacha nke na-enye anyị ohere nsonaazụ kacha mma. Anyị na-arịọ gị ka ị gabiga ule igwefoto anyị ga-eme n'ime ụbọchị ole na ole.
Banyere ihuenyo ahụ, anyị na-enwe 6,47 inch nke OLED nwere mkpebi Full HD + nke 2.340 x 1.080 pikselụ na nha 19.5: 9. ọ dịghị ihe ọzọ na ihe na-erughị. Nnukwu esemokwu maka iwetu mkpebi 2K nke Huawei Mate 20 Pro nyere, ọkachasị iburu etu ihuenyo dị mkpa. Ọ bụ eziokwu na Huawei nwere ike ịbanye na obere mkpebi, mana n'eziokwu, iji kwa ụbọchị anaghị akọ ụkọ, n'eziokwu achọpụtara m na ọ na-enye afọ ojuju ọbụlagodi ogo nke ọchịchọ, ọ bụ ezie na "mmetụta egwurugwu" ma ọ bụ mgbanwe nke hue ahụkarị nke ogwe osisi OLED nke njirimara ndị a na-egosi, ọbụnadị ịmara na ọ bụ curved n'akụkụ.
Ihe mmetụta kachasị mma na ihuenyo, obodo kwụụrụ na ọtụtụ ndị ọzọ
Achọpụtawo m n'ọtụtụ ule na azịza ọsọ ọsọ nye ajụjụ gị, E gosipụtara ihe ngosi akara mkpịsị aka ihuenyo nke Huawei P30 Pro iji tụnyere nke Mate 20 Pro na nke Samsung Galaxy S10 dị ka nke kachasị mma n'ahịa. (nke a bụ echiche nke onwe m). Onye ahụ enyela m ihe mgbochi kacha nta n'ụzọ ma nye m nsonaazụ kacha mma. Otu akụkụ iji banye na akaụntụ na nnweta nke njirimara ndị a.
Maka akụkụ ya na batrị anyị nwere nhọrọ, 4.200 mAh na SuperCharge ruru 40W nke ga - enye gị ihe na - erughi 70% batrị na naanị nkeji 30 ịkwụ ụgwọ. Onwe m, n'okpuru ọnọdụ nkịtị ejiri m 30% nke batrị ahụ rute na njedebe nke ụbọchị, na-achọ ka ị rute na ngwụcha ụbọchị na-enweghị nchekasị ma jiri ihe ị na-achọghị na-eme ụbọchị abụọ na-enweghị nsogbu ọ bụla. Ọzọkwa Huawei egosila na batrị dị ezigbo mkpa nye ndị ọrụ ya.
Anyị nwere atụmatụ ndị ọzọ na-ewepu ngwaahịa ahụ Byda Dolby Atmos Iji nwee ọ contentụ ọdịnaya ọdịyo nke nyiwe dakọtara dịka Netflix, ndị na-ekwu okwu zuru oke, na-erughị ogo nke ndị na-eweta dị ka Huawei Mate 20 Pro ma ọ bụ Samsung Galaxy S10 +, ikekwe otu n'ime isi ya adịghị mma. Otu ihe ahụ na-eme IP68 mgbochi mmiri na anyị etinyela ule na ụbọchị anyị taa na ị nwere ike ịhụ na ọwa YouTube anyị. Maka nke ya NFC ga - ekwe ka anyị, tinyere ihe ndị ọzọ, iji ụzọ akwụmụgwọ akwụghị ụgwọ na WiFi ya nke abụọ na-ejikwa "megabytes" niile nke anyị butere n'ụlọ maka nsonye 5 GHz.
EMUI ka n’abụghị
Ihuenyo 2K ga-etinye ya dị ka ihe kachasị mma n'ahịa
Egwu maka ndị hụrụ Jack 3,5mm
Otu oge ọzọ na ngwaọrụ ụlọ, ihe masịrị m banyere Huawei P30 Pro bụ EMUM, n'agbanyeghị na mmelite natara n'oge nyocha na EMUI 9.1 dị ezigbo mma, ọkachasị na mmejuputa ngagharị ọsịsọ, ọ ka nwere usoro nke ngwa arụnyere dị ka ọkọlọtọ na-ekwesịghị ekwesị maka njedebe nke ọnụahịa a. N'aka nke ọzọ, ihuenyo ahụ, n'agbanyeghị na ọ dị oke mma, na-achọ ka m si ele ya anya site n'aka onye ọrụ n'ihi oke njupụta nke agba ndị ọ na-enye.
Ogo nke ihe na imewe
Ihe ntanetị kachasị na ihuenyo m nwara
Igwefoto ekwentị kacha mma ruo taa
Ezigbo obodo na ọtụtụ ibu
Ihe kacha masị m bụ igwefoto gị dị ịtụnanyaO doro anya na ọ bụ ihe kachasị mma n'ahịa ma ọ nweghị ihe ị ga-eme mkpesa banyere ya, na-enwe ọ enjoyụ na eserese. N'aka nke ọzọ ihe mmetụta mkpisi aka pụtara ịbụ ndị kasị mma nke na ihuenyo ndị, mgbe nnwere onwe Ọ bụ ezigbo iwe, na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ọnụ na-enweghị amata nkọwa a mgbe niile.
Huawei P30 Pro - Nyocha
Anyị nwere ike ịnweta nke a ọnụ site na 949,99 n'ọtụtụ isi nke ire na Spain dị ka Carrefour, nnweta dị mfe na njedebe nke bụ n'ezie "Pro" ma na arụmọrụ na ike, na-eme ya de facto otu n'ime ndị kachasị mma na mpaghara gam akporo, na-ama aka ọzọ nke ụlọ ahụ dịka Huawei Mate 20 Pro. Otú ọ dị, nke ikpeazụ a "na-efunahụ" ya na P30 Pro n'ihe gbasara igwefoto, ma ọ bụghị nke ukwuu, nke mere na n'otu ọnụahịa ahụ enwere nnukwu obi abụọ n'etiti onye ọrụ ahụ. Agba agba nke Huawei họpụtara yiri ka ọ dị m ka ọ na-aga nke ọma, si otú a na-achịkwa iji mee ndị ọrụ ole na ole dị iche iche mma. Ya mere, ọ bụ echiche ikpeazụ m na Huawei P30 Pro m hụrụ onwe m n'ihu otu n'ime ngwanrọ gam akporo kachasị ewu ewu nke m nyochara na Androidsis, ngwaọrụ akwadoro nke ọma nke nwere ọkụ na onyunyo ya, mana nke ahụ ga - echekwa maka Ogologo oge niile nke ndị mmadụ, ọkachasị mgbe ụlọ ọrụ na-agba mbọ ịnye ọnụahịa anaghị akwụ ụgwọ, Ọ ga - abụ otu n'ime ndị kacha ere ahịa na Spain ọzọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Huawei P30 Pro, ihe karịrị igwefoto obi ọgụ [Nyochaa]
Igwefoto Google na-agbakwunye ọnọdụ gbara ọchịchịrị na ihe ngosi ọhụụ
Google Pixel 3a dị nso karịa mgbe ọ bụla: Google na-egosi na mbido ya dị nso